WEB misy ny OpenOffice izay mifanohitra amin'ny Microsoft sy Google Office. | Avy amin'ny Linux
codelab | | fampiharana, GNU / Linux, About us
Izy ireo dia mamaritra ny tenany ho orinasa rindrambaiko misokatra, "Orinasa rindrambaiko misokatra manelingelina", Open-Xchange, ekipa mpamorona ny OpenOffice office suite malaza dia nanambara ny famoahana ny Documents OX, efitrano misy birao mifototra amin'ny rahona izay mandeha amin'ny tranokala misy anao, manasongadina ny OX Text ho fitaovana fanodinana teny.
Amin'ny fiandohan'ny volana aprily no fotoana nofidian'ny mpiasan'ny tetikasa handefa ny kinova voalohany an'ity fitaovana ity eo ambany Lisansa GNU sy Creative Commons (Lisansa GNU General Public 2 ary Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5). Amin'ity fanombohana ity, fampiharana roa hafa izay ho anisan'ity suite ity, Presentation ary Spreadsheets, no hambara koa, fitaovana izay aseho amin'ny anarany, dia ahafahantsika manao ny fampisehoana sy mamorona na mitantana ireo takelaka misy anay, ao amin'ny ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ireo lahatsoratray miaraka amin'ilay Taratasy OX voalaza etsy ambony.
Ny rindrambaiko dia manolotra antsika mivantana ny fahafaha-manitsy ireo endrika an-tsoratra an'io Microsoft Word (.docx) sy OpenOffice / LibreOffice (.odt). Ho azo atao koa izany fanovana soratra amin'ny fomba fiaraha-miasa, izany hoe mpampiasa maro no afaka mijery sy manitsy ny atin'ny antontan-taratasy mitovy amin'izany amin'ny fotoana tena izy miorina amin'ny «fiaraha-miasa voarindra«, Ho fanampin'ny famelana anay hitantana karazana antontan-taratasy amin'ny endrika maro hafa.
Ny iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ireo rindranasa ireo dia ny fanohanana tsy manimba ny endrika an'ny Microsoft sy OpenOffice / LibreOffice, izay midika fa ny antontan-taratasy miorina amin'ny XML dia azo vakiana, amboarina ary hotehirizina ao anaty endrika am-boalohany miaraka amin'ny ambaratongam-pahatokiana izay mbola tsy nahazoana fangatahana taloha miaraka amin'ireo toetra ireo (tadidio fa miresaka momba ny fampiharana miorina amin'ny tranonkala).
Open-Xchange dia hanome fahazoan-dàlana ara-barotra izay hanolotra anay fanampiana ho an'ny mpandraharaha fifandraisan-davitra sy finday, orinasa mpampiantrano, orinasa rahona, VAR ary SI's hahafahan'ny SaaS, fitantanana serivisy sy paikady amin'ny teknolojia finday.
Raha mampiasa an'ity rindrambaiko ity amin'ny fampiasana manokana, ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa na tsy mitady tombom-barotra, dia azontsika atao ny mampiasa azy io maimaimpoana.
Avelako horonan-tsary fampidirana kely ianao.
Inona no hevitrao amin'ny fampiasana fitaovana amin'ny rahona hitahirizana ny mombamomba anao?
Azonao itokisana ve ity karazana serivisy ity raha te hampiasainao manokana sy ho an'ny matihanina?
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny OX Text ianao dia afaka manindry eto.
Fandikana maimaimpoana ny vaovao tany am-boalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WEB misy ny OpenOffice izay mifanohitra amin'ny Microsoft sy Google Office.
tamin'ny fotoako dia nantsoina hoe Google Docs fa tsy Google Office xD
Efa taloha ny vaovao ary tsy fantatro izay loharano nipoirany, saingy ao amin'ireo lahatsoratra hafa dia tsy misy miresaka momba ny fifandraisana amin'ny openoffice, angamba ny an'ny lahatsoratra amin'ny anglisy no namorona azy
Ny vaovao dia tsy antitra satria manondro ny daty famoahana ny famoahana voalohany sy ny rohy hizahana ny fampiharana, ny angona izay inoako fa mbola tsy naseho na taiza na taiza, ary momba ny fifandraisana amin'i OpenOffice dia manondro anao ny efijery fisamborana izay nalefako tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha, antontan-taratasy navoakan'izy ireo ho ohatra amin'ny tranokala fampiharana.
Raha tonga ianao haneho azy herinandro aorian'ny tontolon'ny bilaogy iray manontolo, raha antitra izany ary tsy manampy ahy ny fakana anao dia tsy maintsy novakiako ny (eo ankavanan'ny farany ambany) hijerena azy, ary eny, miala tsiny aho noho io xD
Heveriko fa ny hevitrao taloha / vaovao dia tokony hamerenanao azy io, heveriko fa somary mitombina izany ary ampiasainao araka izay mety aminao.
Etsy ankilany, ny tranonkala ahazoana vaovao misimisy kokoa momba ny vaovao dia aseho ao amin'ilay lahatsoratra, tokony ho malina kokoa ianao alohan'ny hiampangana an'izay namorona ny vaovao, torohevitra maotina fotsiny izany, afaka manaraka azy ianao na tsia.
Satria ny tanjon'ny lahatsoratra dia tsy ny famoronana resabe, heveriko fa eto no namahana ny olana.
Tranainy ny robina - ary Debian !!
Heveriko fa ho safidy tsara izany!
Nanandrana aho ary mahafinaritra io 😀
ahoana ny fametrahana ny birao amin'ny mpampiasaagent ???
dia ampiana amin'ny farany
Oo tiako ny interface, tena manintona. Tsy misy fisalasalana, raha mahazo zavatra toa izany ny OpenOffice eo amin'ny birao, hitranga amiko tsy misy fisalasalana izany.
Tena mino aho fa manao asa lehibe eo amin'ny sehatry ny sary izy ireo, hiandry mandra-pahamatorana kokoa izahay hahita izay atolotray antsika.
Tsy mandeha amin'ny Firefox
Amin'ny tranga misy ahy amin'ny Firefox 19.0.2 dia mandeha tsara izy.
albert I dia hoy izy:
Izy io dia manana interface toa ny calligra, ahoana ny asany raha ahena ny varavarankely? Mifanaraka sa tsia amin'ny fihenan'ny habaka?
Valio amin'i albert I
Hafahafa, nanandrana azy io tamin'ny kinova Firefox mitovy aminao ihany aho.
Ny zava-mitranga dia ny fampiasan'ny Arch ...
voamarina, miasa amin'ny firefox 19.0.2 izy, na dia eo amin'ny Italiana Oo aza
Amin'ny alàlan'ny fanamarihana, ity fiaraha-miasa eo amin'ny OX sy LO ity dia tena hahasoa raha toa ka mitambatra ny fahaiza-manao samihafa ary manome zavatra ho an'ny UI 😀
Azo apetraka amin'ny Espaniôla ao amin'ny menio XD
Tsy vaovao tsara fotsiny izany, tena tsara :-D. Amin'izao fotoana izao dia "superficially" no nampiasako azy satria santionany io, dia homeko fotoana bebe kokoa ianao hahitana azy, nefa toa mampanantena tokoa. Miandry ny «Spreadsheets» ihany koa aho 😉
Vaovao tsara ity: D. Toa tsara.!
Ny lisansa Creative Commons dia tsy natao ho an'ny programa. Hevi-dratsy momba ry zalahy.
Tsy hitako ny olana
Raha noforonina ho an'ny atiny famoronana ny lisansa dia tsy azon'izy ireo ampiharina amin'ny rindrambaiko amin'ny fomba tsy ahafahan'ny zavakanto mahazo alalana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana tsy mendrika.
Toy ny mihinana saosisy miaraka amina jam.
Azoko ampiasaina amin'ny tranokalako ve izany? Raha atao teny hafa, ao amin'ny tranonkalako dia afaka mampakatra antontan-taratasy momba ny birao aho. Azoko atao ve ny mahita sy manitsy azy ireo amin'ity fitaovana vaovao ity? Misaotra anao..
Fampidirana ny JACK Audio Connection Kit